Thwebula Dashlane 6.1933.0.22573 – Vessoft
Ikhasi elisemthethweni: Dashlane
Dashlane – omunye wabaphathi bephasiwedi abanamandla kakhulu ngokusekela ukuvumelanisa ifu. Isofthiwe isindisa ulwazi oluyimfihlo efomini lokubethela kuma-server kanye namadivayisi womsebenzisi, udinga ukufaka iphasiwedi enkulu ukuze ungene ngemvume ku-akhawunti futhi ufinyelele kudatha egcinwe. UDashlane uthatha idatha ye-akhawunti ngemuva kokungena ngemvume kumawebhusayithi futhi akhiqize ngokuvakashelwa kwesibili. I-Dashlane ikuvumela ukuba ugcwalise amafomu okukhokha e-intanethi, amarisidi, izihlonzi nolwazi lomuntu siqu. Isofthiwe iqukethe i-module ekhethekile engashintsha amaphasiwedi amaningi e-inthanethi ngokuchofoza okukodwa kwegundane. I-Dashlane iphinde isekele amaphasiwedi namanothi abelane nabasebenzisi abhalisiwe noma oxhumana nabo ophuthumayo.
Ukushintsha kwephasiwedi ngokuzenzekelayo kumawebhusayithi amaningi
Ukugcwalisa okuzenzakalelayo kwewebhu
Ukusekela oxhumana nabo abaphuthumayo
Amazwana ku Dashlane
Dashlane software ehlobene
Lesi yisixazululo esibanzi se-antivirus esivela kubathuthukisi base-Ukraine bokuvikelwa okusebenzayo ngokumelene namagciwane, i-malware ne-spyware.
Lena umhleli wesithombe somdwebo wedijithali equkethe isethi yamathuluzi wokudweba ngezilungiselelo eziguquguqukayo.